Jameson Crested 0.7l - Wevino.store
JAMESON ANOGONESWA (40% VOL.)
Jameson Crested mucherechedzo wakasanganiswa kubva kuIreland. Iyo ine dzakasiyana dzakasiyana malita kubva Midleton distillery. Aya ndiwo chete marara, ayo akakura pakati pemakore gumi kusvika gumi nemaviri muI-Bourbon neOloroso makaseti (sherry).
Iyo inopindirana yakaisvonaka yezvinonhuwira zvakasiyana zvinoratidzwa panguva yekunzwa kwaJameson Crested. Iyo mhino inobata zvinoratidzwa zvemichero nepo inonhuhwirira palette inotenderedzwa kure ne vanilla uye caramel. Mhedzisiro ndeyekuenderana uye yakaoma kuumbwa.
Iko kuravira kweJameson Crested kunonyanya kupfava nematani anotapira emichero yakaomeswa uye sherry. Munguva yekuenderera mberi kwekuravira, zvinyorwa zvegreen chokoreti zvinobuda uye kupedzisa kuravira.
Iyo yepakati yakareba uye yakapfava kupedzisa inoratidza zvimiro zvekupedzisira zveoak uye michero yezvinyorwa uye inotaura zvakanaka kune mukanwa nekukwiridzika kwakawanda uye kuonekera.